पूर्वजर्नेलको सरिता गिरीलाई चे'तावनी : सरिता जी यो तपाईको हैन् भारतको आत्मा बोलेको हो, नागरिकता खा'रे'ज गरेर का'रवा'ही हुनेछ - Filmy News Portal Of Nepal
पूर्वजर्नेलको सरिता गिरीलाई चे’तावनी : सरिता जी यो तपाईको हैन् भारतको आत्मा बोलेको हो, नागरिकता खा’रे’ज गरेर का’रवा’ही हुनेछ
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसदमा दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै आ’लोचना भएको छ । आइतबारको संसदमा उनले दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर नेपाली सेनाका एक जना पूर्व जर्नेलले पनि आपत्ती जनाएका छन् । आइतवार उनले नेपाली सेनाको बारेमा अभिब्यक्ति दिएकी थिइन् । सांसद गिरीले निजगढ विमामानस्थलको नाममा नेपाली सेनाको एयरबेस बनाउन लागेको, बाराको पथलैयामा सेनाको ब्यारेक राखेको भन्दै संसदमै आ’लोचना गरेकी थिइन् ।
उनको यो अभिब्यक्तिको सेनाका पूर्व जर्नेलले आ’पत्ती जनाउँदै यो अभिब्यक्ति सरीता गिरीको नभएर भारतको आ’त्मा बोलेको टि’प्पणी गरेका छन् । फास्ट ट्रयाक बनाउन नदिन भारतले खेलेको भूमिकाको प्रशंग उठाउँदै सरीता गिरीले दिएको अभिब्यक्ति त्यसैको प्र’क्षपो’षण भएको बताएका छन् । पूर्वजर्नेल डा.बस्न्यातको भनाइ जस्ताको जस्तै ‘सरिता गिरी त्यो मान्छे हुन जसले नेपालको नाम नै फे’र्नुपर्छसम्म भनेकी थिइन् । यो निकै ठूलो राष्ट्रघा’ती कुरा हो । बानेश्वरको अल्फाबिटाको बिल्डिङमा पहिला पनि उनले बोलेको मैले सुनेको छु ।
आज संसदमा उनले बोलेको कुरा सुन्दा फाष्ट ट्रयाक सेनाले बनाएकोमा भारतीय सरकार खुसी छैन भन्ने बुझिन्छ । सो आयोजना सेनालाई दिने कुरा भारतले तु’हाउन खोजेको थियो । विमलेन्द्र निधी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा फाष्ट ट्रयाक योजना भारतलाई दिने निर्णय गरेकै हो । पछि अन्र्तराष्ट्रिय द’बाब आएपछि सेनाको जिम्मा दिइयो । चीनबाट सेनाको फौज आएर फाष्ट ट्रयाक हुँदै भारत पुग्छ भनेर यसमा यसको विरोध छ । यो आयोजना भारत आफैले लिन खोजेको थियो । ठेक्का लिएको २५ वर्षसम्म पनि काम नगर्ने यिनीहरुको योजना थियो ।
अहिले सरिता गिरीको जुन असन्तुष्टि छ त्यो भारतको आत्मा बोलेको हो । त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको आत्मा बोलेको हो । उनी जस्ता पात्रहरुलाई नेपाली नागरिकता दिएर संसदमा बोल्न दिनु भनेको नेपालको दुर्भाग्य हो । म त भन्छु यिनको नारिकता र पद रद्द गर्नुपर्छ । उनलाई माननीय बनाएर जसरी सभामुखका अगाडि उभ्याइनु नै नेपालको दुर्भाग्य हो । नेपालका सुरक्षा अंगले यिनलाई निगरानी राख्नुपर्छ, यी माथि कारवाहीको माग गर्नुपर्छ । यिनको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ ।
तपाईं कोरियाबाट आउनुस् नेपाली बुहारी हुनुस्, अमेरिकाबाट आउनुस् हुनुस्, अमेरिकाबाट आउनुस् बुहारी हुनुस हामीलाई मतलब छैन तर देशको स्वाभिमान, राष्ट्रिय अ’खण्डतामा आँ’च आउने कुरा गरिन्छ भने त्यस्ता मान्छेको नागकिरता खा’रेज गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि संसारभरको मान्छेलाई बस्ने अधिकार छ । ग्रीन कार्ड लिएर, नागरिकता लिएर बस्ने अधिकार छ तर कसैले पनि अमेरिकाको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई अलिकति मात्रै पनि आघा’त हुने गरेर बोल्दैन ।
तर, नेपालमा यस्तो खेल गर्ने एउटा माओवादीको संस्कार हो, कांग्रेसको पनि यस्तो संस्कार छ । तर, अहिले केही अंगीकृतहरुले खेल खेलिरहेका छन् । बन सा’ङ्लाले घर सा’ङ्लालाई खान लागेको छ । नेपाली सेनामाथि यिनीहरुको किन यति रिस ? के भारतीय सेना ल्याउनुप¥यो नेपालमा ? यो असाध्यै घा’तक कुरा हो । यस्तो कुरा त दु’श्मनले मात्रै गर्ने हो । नेपालमा सांसदको एउटा लोगो दिएर माननीय भन्नु नेपालको बे’इज्जत मात्र हो ।
पथलैयामा सेनाको ब्यारेक राखेको छ त्यो सरिता गिरीको माइतिको भूमि त हैन । नेपालको भूमीभित्र जहाँपनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी त रहन्छ । यो त हाम्रो अधिकारको कुरा हो । कि त पथलैयासम्म भारतको हो भन्नुप¥यो । अनि कालापानी वा नालापानी कहाँ राख्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । यस्तै कुरा बोलेर भारतलाई रिझाएर माओवादीले पनि नेपालमा क्रा’न्ति सम्पन्न ग¥यो ।
एमालेका सत्ताधारीले पनि नेपालमा भारतीय सेना ल्याएर राजालाई अ’पह’रण गर्नुपर्छ भनेर आफू प्रधानमन्त्री बने । नेपाली कांग्रेसका प्रायः नेताहरुको पनि यस्तै अभिब्यक्ति छ । विशेषगरी सेनाको कुरामा प्रदीप गिरी, विमलेन्द्र निधी, सरिता गिरी कसैको कुरा फरक छैन् । नेपाली सेनाले के चाँही ग¥यो र अहिले यिनीहरुको टाउको दु’ख्यो ? यो अरु केही हैन भारतको आत्मा बोलेको हो ।